Dhammaan cuntooyinka waxaa loo diyaariyey kuwo cusub oo aan lahayn wax ka-ilaaliyayaal ah waxaana lagu sameeyaa gudaha. Cunto kastaa waxay ka kooban tahay qaybo caafimaad leh oo ay ka mid yihiin entree, khudrad, rooti ama hadhuudh, miro ama macmacaan iyo cabitaan. Waa tan liiska tusaalaha, menú en español.
Meals on Wheels waxay siisaa qiime aad u wanaagsan waxa aad hesho - cunno cusub oo diyaarsan, oo diyaar u ah in la cuno oo la keeno isla albaabkaaga. In kasta oo aan weydiisanayno tabaruc yar xagga cuntadaada, qiimuhu wuxuu ku saleysan yahay baahi. Cunnooyinka waxaa loo oggol yahay inay qayb ka yihiin barnaamijka ka-dhaafitaanka Medicaid ee guriga-iyo adeegyada ku-saleysan bulshada ee gobolka Minnesota, iyo barnaamijyada kale ee kaabista ayaa sidoo kale kaa caawin kara daboolidda adeegga gaarsiinta cuntada. Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan ikhtiyaarada ikhtiyaariga ah ee macaamiishaada, naga soo wac (612) 623-3363.